Wax Ka Ogoow Qaladaadka Guddoomiyayaasha Degmooyinka Gobolka Benaadir (Q:1-aad) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Wax Ka Ogoow Qaladaadka Guddoomiyayaasha Degmooyinka Gobolka Benaadir (Q:1-aad)
Wax Ka Ogoow Qaladaadka Guddoomiyayaasha Degmooyinka Gobolka Benaadir (Q:1-aad)
Guddoomiyaha gobolka Benaadir Mudane Thaabit cabdi maxamed oo safar shaqo dibadda ugu maqnaa beryihii lasoo dhaafay ayaa waxa ay sheegayaan dadka falanqeeya siyaasadda gobolka Benaadir in guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka ay sameeyeen habac sanaan aad u liidato oo dhan walba ah.
Waxa aan soo qaadan doonnaa degmooyinka qaar iyo howl gabka ay sameeyeen guddoomiyayaashooda.
Tusaalle ahaan guddoomiyaha degmada Hodan Maxamed Axmed Cantoobo ayaa ka gaabiyay howsha ammaanka waddooyinka degmadiisa, oo waxaa jira in degmadaas ay noqotay midda ugu badan ee isku dhexyaaca waddooyinka (Trafic Cham) ugu badan lagu arko.
Nasiib darro guddoomiyaha ayaa garan waayay in uu ciidan taraafiko ah geeyo isgooyska tarabbuunka oo kamid ah waddooyinka ugu mashquulka badan degmadaas.
Intaas waxaa raacda in degmadiisa ay marto waddooyinka ugu badan ee wadnaha u ah gobolka, mana jirto qorshe cad oo uu u dejiyay Jaamka waddooyinka qaar ee degmadiisa ay leedahay.
Maalinba degmo ayaan ka hadli doonnaa, wax qabad la’aanta heysata, todobaadkan waxaan diirradda u saari doonnaa jaamka ama mashquulka tirada badan ee ka jira qaar kamid ah degmooyinka gobolka Benadir.